COVID namono: traboina tamin'ny hetsika farany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » COVID namono: traboina tamin'ny hetsika farany
mamono ho faty
Nandritra ny taona faharoa nifanesy, namono ny Fetiben'ny Mozika Pattaya ny areti-mifindra COVID-19.
Ny famerenana ny laoniny ho toy ny faritra mena coronavirus dia nanakana ny hetsika ao an-tanànan'i Pattaya.
Nofoanana ihany koa ny Fetiben'ny Songkran Kong Khao fanao isan-taona ao amin'ny Lan Po Public Park.
Nilaza ny Ben'ny tanàna lefitra Pattaya fa hitohy ny tsenan'ny Naklua Walk & Eat ny faran'ny herinandro satria mino izy fa tsy maintsy mitohy ny hetsika tarihin'ny fizahan-tany.
COVID dia namono hetsika iray hafa ihany koa tamin'ny nanambaran'ny ben'ny tanànan'i Pattaya Sonthaya Kunplome omaly ny fanafoanana ireo kaonseritra Fetiben'ny mozika tamin'ny 30 aprily 2 may 2021. Ny ben'ny tanàna dia nanonona ny famerenana ny endrik'i Chonburi ho toy ny faritra voafehy "coronavirus" fifehezana avo indrindra an'ny Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA).
Nanafoana ihany koa ny lapan'ny tanàna ny Fetiben'ny Songkran Kong Khao fanao isan-taona tao amin'ny Lan Po Public Park izay natao ny 20 aprily. Nanamarika ny Ben'ny tanàna fa ny Pattaya Kite Festival, izay miparitaka mihoatra ny 300 metatra amin'ny Pattaya Beach hatramin'ny 19 aprily, hitohy. Ny birao fampiroboroboana ny orinasa madinidinika sy Medium ary ny seminera Connext an'ny Chambre de Commerce an'ny Thai, izay maharitra 19 aprily, dia hitohy ihany koa, hoy izy.